Iiraan oo “cadowgeeda” ku eedeeysay dibadbaxyada | Saxil News Network
Iiraan oo “cadowgeeda” ku eedeeysay dibadbaxyada
Image captionMadaxweyne Xasan Ruuxaani waxaa lagu eedeeyay dhaqaale xumada dalka
Hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan ayaa dalal uu “cadow” uu ku tilmaamay ku eedeeyay in ay kicinayaan isu soo baxyada ka socda dalkaasi ee sababay in 22 qof ay dhintaan.
“Dhowaanahan, cadowga Iiraan waxay adeegsanayaan qaabab kala duwan sida dhaqaale, hub, siyaasad iyo sirdoon, si ay qalalaase uga dhaliyaan Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan,” ayuu yiri hoggaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi.
Xuquuqda Sawirka @khamenei_ir@KHAMENEI_IR
Wuxuu sheegay in shacabka uu kala hadli doono xaaladaha hadda taagan “marka uu waqtiga u saamaxo”.
“Illaa 200 oo qof ayaa sabtidii la xiray, 150 kalena waxaa la qabqabtay Axaddii, Sidoo kale Isniintii waxaa la xiray illaa 100 qof,” ayuu yiri Cali Asghar Naserbakht.
Madaxweyne Xasan Ruuxaani wuxuu horey u sheegay in dibadbaxyada ay yihiin “fursad, oo aysan ahayn halis”, laakiin wuxuu ku hanjabay in laga hortagi doono “kuwa sharciga jebinaya”.
Dowladda Mareykanka ayaa taageertay dadka isu soo baxay oo ay ku tilmaamtay “iska caabin geesinimo ah”.
Dowladda Turkiga waxay muujisay walaaceeda ku aadan deganaansho la’aanta Iiraan, waxayna ka digtay in xaaladda ay sii xumaato.
Wuxuu bartiisa Twitter-ka ku qoray “Shacab waynaha dalka Iiraaan waxaa la cadaadinayay sannado badan. Waxay u gaajeysan yihiin cunto iyo xuriyad”.
Xuquuqda Sawirka @realDonaldTrump@REALDONALDTRUMP
Midowga Yurub wuxuu dwladda Iiraan ka dalbaday in ay xaqiijiso “xuquuqda dibadbaxyada nabadda ah”, waxayna sheegeen in maamulka Iiraan ay kala hadleen arrinta ayna kor kala soconayaan xaaladda